Uxinzelelo olwahlukileyo lwe-OEM yoXinzelelo lwamaXabiso aManzi aManzi mveliso kunye nabathengisi | Wandekai
Iziko lamanzi elixubileyo lisebenza kwiinkqubo zokufudumeza ngaphantsi. Ixuba amanzi aphezulu obushushu ukusuka kwicala lokufudumeza amanzi kunye namaqondo obushushu asezantsi ukusuka kumanzi abuyayo ashushu.
Valve Exhaust valve: Zenzekelayo zeemoto ukugcina inkqubo izinzile.
Umda wobushushu: Xa inkqubo ifikelela kubushushu bokulungisa umda wobushushu, yeka ukunxibelelana nempompo yamanzi
Valve Umahluko woxinzelelo lwevalvevu: gcina uzinzo lwangaphakathi lwenkqubo kunye nokukhusela inkqubo
Valve Thermostatic ivelufa: nyenyisa ubushushu efunekayo kunye nokugcina ubushushu rhoqo
⑤ Khupha ivalve: ekulungeleyo ukukhutshwa kwelindle ukuze usebenze ngcono
Indawo yempompo yamanzi: Uhlengahlengiso lwamanqanaba ama-3 amanqanaba okuthuthuzela ahlukeneyo.
⑦ Ithemometha: bonisa ubushushu bokwenyani, ukuvumela ukuba ulawule ukusetyenziswa kwenkqubo
Phambi kokuba isixhobo sokuxuba amanzi sishiye umzi-mveliso, isivalo sokuxuba amanzi eshushu, umda wobushushu, umahluko wokudlula koxinzelelo lwevalve, kunye nempompo yamanzi ebekwe ngesiqhelo; Ngokwendawo esetyenziswayo eyiyo, Unokwenza kwakhona isiseko sokulungisa iphutha ukuze ufumane amava emveliso angcono.
2.Isixhobo sokuxuba amanzi kufuneka sifakwe kwindawo enomjelo womgangatho; kukulungele ukulungiswa kwexesha elizayo, ukulungiswa kunye nokutshintshwa, kwaye kuthintela ukudala ilahleko kuwe.
Isixhobo sokuxuba amanzi kufuneka sifakwe kwaye silungiswe ziingcali ze-HVAC; Nceda ukhethe izinto ezifanayo ukuze uqhagamshele izixhobo, ukungena kwamanzi kunye nenkqubo yokubuyisa ayizukusebenza ukuba ibifakwe ngendlela echaseneyo.
Obusemagqabini ubunjani Ngaba iseti yoyilo lwemveliso kunye nophuhliso, imveliso kunye nentengiso kunye norhwebo njengenye yeeshishini lobuchule ivalve (imibhobho yamanzi)
Egqithileyo Brass PEX ukutyibilika Lokulinganisa